Moto wakakura uye kuputika
Mabhiza ane nyaya yekutaura
Kuputsa Nhau, Dzemazuva ese kana vhiki nevhiki email zvinyorwa
Dzvanya apa kana kupururudza nzira yese pasi kuti uone kuti isu tiri murudo naani :)
musha » mbiru » International Yevashanyi Nhau » UK Kufamba Nhau » Moto muhombe nekuputika: chiteshi chechitima cheLondon cheEndlovu neCastle chakabviswa
1 mu3 COVID-19 kesi munyika yose pasvondo rapfuura yakaitika muFlorida neTexas. …
Kunyangwe nyika ichivhurwa iwe unonzwa kunetseka kana kufara, chero nzira: izvi…
Vatambi Vakakosha Sanganisira BAC Sports, Great Atlantic Sports Kufamba, QuintEvents uye MATCH Kugamuchira Vaeni
Hwevanhu zviuru zana nemakumi mashanu nezvishanu nemakumi matatu nematatu vakafa zvinosanganisira coronavirus izvozvi zvaitika kuUK, iyo…
COVID-19: UK inorekodha imwe 138 coronavirus kufa - yakanyanya zuva nezuva huwandu si…
Kuputsa Kufamba Nhau • European yekufamba nhau • Hurumende Nyaya • International Yevashanyi Nhau • mwe • Rail Kufamba • Inotungamira Nhaurwa Nhau • chengetedzo • Tourism Nhau • Tourism Kutaura • Zvokufambisa Nhau • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Nhau dzeKufamba • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Inotyisa Nhau • UK Nhau
Moto muhombe nekuputika: chiteshi chechitima cheLondon cheEndlovu neCastle chakabviswa
Moto uyu wakaputira zvikamu zvitatu zvekutengesa pasi pechitima chechiteshi, pamwe nemotokari ina nebhokisi rerunhare.
London Fire Brigade yakurudzira vagari kuti vadzivise nzvimbo iyi uye vachengetedze mahwindo nemikova yakavharwa.
Mahofisi eBritish Transport Police neMetropolitan Police vari kuendawo kunzvimbo iyi
Chiitiko ichi hachifanirwe kunge chine chekuita nekutya, mapurisa akadaro.
London Underground chiteshi cheEndlovu neCastle chakaburitswa nhasi mushure mekunge moto muhombe wabvapo muzvikamu zvebhizimusi padyo nechiteshi chechitima
Huru gobvu hweutsi hutema hwaigona kuoneka huchibva kunzvimbo yekutakura neMuvhuro mumifananidzo yechiitiko chakatumirwa pasocial media. Imwe vhidhiyo yakaratidza vashandi vechimbichimbi nevapfuuri vachiona moto uyu moto mukuru wemoto ukangoerekana wabva parutivi rwechivakwa.
Dzinosvika gumi nemashanu mota dzinodzima moto uye vanodzima moto zana vaendeswa kuti vabate moto, maererano neLondon Fire Brigade.
Panga pasati pave nemishumo yekukuvara.
Kuputika kumwe kwakazunguza saiti iyi mushure mekunge moto watanga uye kubuda kwechiteshi kwaive kwave kuitika.
London Fire Brigade yakurudzira vagari kuti vadzivise nzvimbo iyi uye vachengetedze mahwindo nemikova yakavharwa. Mune chirevo, yakasimbisa kuvharwa kwemigwagwa zviripo uye ikati moto wakaputira zvikamu zvitatu zvekutengesa pasi pechitima chechitima chechiteshi, pamwe nemotokari ina nebhokisi rerunhare.
Mahofisi eBritish Transport Police neMetropolitan Police vari kuendawo kunzvimbo iyi.
"Chiitiko ichi hachifungidzirwa kuti chine chekuita nekutya," mutauriri wemapurisa kudunhu reLondon kuSouthwark akadaro.
Anoshanda nechitima Thameslink ataura kuti mitsara yese kuburikidza ne Nzou neCastle yakavharwa uye vezvemoto vari kuongorora mamiriro ezvinhu. Muchirongwa chakapihwa neNational Rail, sevhisi yakati "moto padivi penjanji ” zvinoreva kuti zvitima hazvingakwanise kushandisa chiteshi kusvika kanokwana 8pm nguva yemuno.
Verenga isu | Teerera kwatiri | Titarise |Events| Nyorera | Zvemagariro Midhiya|
Sandals Resorts | Mahombekombe Resorts | Jamaica Tourism Board | Bahamas Yekushanya Bhodhi| Seychelles Tourism Board | Malta Tourism Bhodhi | Nepal Tourism Bhodhi | Guam Vashanyi Bureau | FRAPORT| Etihad Airways| Saudia|Centara Mahotera & Resorts | Euro Expo Vienna| Reed Exhibitions | IMEX | kufamba matunhu | Uniglobe | SunX | Green Globe | Korean Tourism Bhodhi | Hurumende yeBahrain |Asia Hutungamiri Huru | Elite Zvigadzirwa Intl. | Uganda Tourism Board | Kufamba Manitoba | Northern Cape Tourism Chiremera | Humambo hweEswatini
Kuvakazve Ekukurukurirana Kwekufamba
Daily News Taura
Teerera kuTN Nhau